Premier League Round Up: Chelsea, Tottenham Iyo Arsenal Oo Guulo Muhiim Ah Gaareen Liverpool Taako Loo Dhigay | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Maxaa Cusub » Premier League Round Up: Chelsea, Tottenham Iyo Arsenal Oo Guulo Muhiim Ah Gaareen Liverpool Taako Loo Dhigay
Premier League Round Up: Chelsea, Tottenham Iyo Arsenal Oo Guulo Muhiim Ah Gaareen Liverpool Taako Loo Dhigay	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Mohamed Taariikh: 6-April-2017
Kooxda Chelsea ayaa qaaday talaabo ay ku xaqiijin karto hanashada horyaalka Ingiriiska kadib markii ay 2-1 ku dhaafeen naadiga Man City.
Blues ayaa guushaan qaaliga ah kaga mahad celineyso hogaamiyaheeda Eden Hazard halka Man City goolka qura uu u dhaliyya Sergio Aguero.
Chelsea guusha ay gaartay waxay ka dhigan tahay inay hogaanka EPL ku heyso 7-dhibcood oo nadiif ah ayadoo leh 72-dhibcood waxayna cayaartay 30-kulan.
Kooxda Tottenham ayaa guul soo daahday naadiga Swansea City ka heshay kulan 3-1 kusoo idlaaday waxayna Spurs guushan kaga mahad celinee xidigaheeda Ali, Son iyo Eriksen oo sedexda gool dhaliyeen 90-ka daqiiqo marka cayaarta ku dhawaatay.
Tottenham waxay fadhiyaan booska labaad ee Premier League ayadoo 65-dhibcood leh waxayna 7-dhibcood ka hooseeyaan Chelsea ayagoo cayaareen 30-kulan.
Dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa iska qasaarisay fursad ay kusii adkeesan kartay booskeeda 3-aad kadib markii ay garoonkeeda Anfield bar bar dhac 2-2 la dhaafi waayeen naadiga Bournemouth waxaana Liverpool la bar bareeyay cayaarta oo 2-daqiiqo ka harsan.
Liverpool haatan waxay leedahay 60-dhibcood ayadoo 31-kulan cayaartay waxayna labo dhibcood ka sareeyaan kooxda Man City oo 29-kulan cayaartay.
Kooxda Arsenal ayaa wada guulaha kusoo laabatay ayadoo 3-0 ku dubatay naadiga West Ham kulan London Derby ahaa.
Waxayna Arsenal goolasha qaybtii labaad ee cayaarta ayadoo goolasha ay u dhaliyeen Ozil, Walcott iyo Giroud waxayna Gunners-ka haatan leeyihiin 54-dhibcood ayagoo usoo dalaceen booska 5-aad waxaana u harsan 2-kulan oo baaqi u ah Arsenal waxayna cayaareen 28-kulan.
Guud ahaan kulamii Premier League la cayaaray iyo natiijooyinka kasoo baxeen hoos kaga bogo: